December 16, 2019 – Kichuu
Participating in a ‘Meddemer’ Principle or Perpetrating a Reign of Terror in Oromia? By Imiru Itana, December 16, 2019 It is well known that the Oromo were practising the Gadaa democracy in their land Oromia [Read More]
Gamtaa (coalition) dhaabilee siyaasaa Oromoo dhugoomsuun dhimma fardii fi ariifachiisaa dha. Kana hubachuuf ogeessa saayinsii siyaasa ta’uu hin feesisu. -Ummatni Oromoo dhaabileen siyaasaa Oromoo filannootti otoo hin dhiyaatiin dura gamtaa akka ummatan gaafachuu edda jalqabee [Read More]
Namni qalbii qabu, dhoqqee keessa dhaabbatee ‘uffatikoo Adiidha’ hinjedhu.
Namni qalbii qabu, dhoqqee keessa dhaabbatee ‘uffatikoo Adiidha’ hinjedhu. Qalbeessaa Dhangi’aatiin! Mudde 16,2019 Finfinnee Oromiyaa Warri ofiifuu qulqullaa’uu isaan barbaachisu “ani qulqulluudha” jechuutu hanga ammaa furmaata biyyattii maseense. Kanneen hanga ammaa qaamni isaanii laaqii jallinaan [Read More]
Dhagaan bu’uuraa kaawwamee ture, caccabeera. Achi buuten proojaktichaas wallaallameera.
Dhagaan bu’uuraa kaawwamee ture, caccabeera. Achi buuten proojaktichaas wallaallameera. Dubbii PP obbo Lammaatu xumure. Dr. Abiy gubbaarraa gadi erguuf yaale. Garuu obbo Lammaan achumatti harkatti qabe. Amma obbo Lammaa bira gadi darbuu hin dandeenye. Ummatni [Read More]
Waaltaan Daldalaa Itiyoophiyaa Gama Kibbaatti Hundeeffamuuf Jira WAASHINGITAN, DIISII — Gareen investmentii Itiyoophiyaa gama kibbaa lammiiwwan Itiyoophiyaa ala jiraatan kanneen 170 a’an waaltaa daldalaa doolaara miliyoona $15 baasu Hawaasaa keessatti banuuf kan jiran ta’uun beekamee jira. [Read More]
HIV/ AIDS ibsee Jira: “Waa’een Eedsii Dagatamuu Hin Qabu”
HIV/ AIDS ibsee Jira: “Waa’een Eedsii Dagatamuu Hin Qabu” Addunyaa irratti Muddeen tokko “Guyyaa Eedsii Addunyaa” jedhamee kabajamuu eega jalqabee barana waggaa soddomii tokko guutee jira.Itiyoophiyaa keessatti namoonni vaayrasii HIV waliin Jiraatan 649,000 ta’u fi [Read More]
INTERNATIONAL CRISIS GROUP: KEEPING ETHIOPIA’S TRANSITION ON THE RAILS Nairobi/Addis Abeba/Brussels, 16 December 2019 – Firist Published Here What’s new? Clashes in October 2019 in Oromia, Ethiopia’s most populous region, left scores of people dead. They mark the [Read More]
Gooftaa fi Ashkarri waliif ta’aaniiru,addaan isin hin baasiin,ijarraa maqaa. Namni kun gaafuma tokko President Oromiyaa natti fakkaatee hin beeku Waldiigeessiyyu lafa haadhuudhaan maayii baasa kun Waldiigeessa hojii dhabeessadha. Kanaafidha Koloneeltichi Awwaaldigeessa fakkaatu kana akka qodaatti [Read More]
“Rakkooleen jiran kan walirraa nu fageessan waan hintaaneef waliin hojjechuu filanne” -Jaal Daawud Ibsaa (Dh.P.I/Bariisaa) Dhaabbilee siyaasaa hangafa Oromoo keessaa tokko kan ta’e Addi Bilisummaa Oromoo (ABO), jireenya baqaa waggoota dheeraa booda erga biyyatti deebi’e [Read More]